Ukusajingijolo Pi kwenza i-HomePod isebenze no-Spotify, Pandora njll - I-Electronic Components Distributor - Components-Store.com
Ikhaya > Izindaba > Ukusajingijolo Pi kwenza i-HomePod isebenze no-Spotify, Pandora njll
Thola ikheli le-IP lendawo ye-Raspberry Pi yakho (esimweni sami 192.168.1.16):
Faka i-NodeJS 9. Okokuqala ngidinga ukukhipha inguqulo yokuzenzakalelayo yakudala ye-NodeJS:
Indlela evamile yokufaka i-NodeJS ku-Linux ayizange ibonakale isebenza ngenxa yeprosesa ethile ye-ARM esetshenziselwa i-RaspberryPi Zero, ngakho-ke kwakudingeka ngilande armv6 binary ngqo bese ufaka usebenzisa le miyalo:
Engeza lokhu ngezansi .profile:
Layisha i-.profile ebuyekeziwe:
Faka i-airtunes Ilabhulali ye-Node (Ngadala imfoloko yokusebenza eduze kwe-bug):
Faka futhi uqale i-BabelPod:
Kuleli phuzu kufanele ukwazi ukuvula i-web ye-BabelPod kusuka kukhompyutha noma kwifoni kwinethiwekhi yakho ye-WiFi ngokuya ku-http: // [raspberry_pi_ip_address]: 3000 / (esimweni sami http://192.168.1.16:3000/) . Ukufakwa komugqa kufanele kube khona njengendlela yokufakwayo (uma kwenzeka kuvela njenge "I-USB Audio"), ne-HomePod yakho (namanye amadivaysi e-AirPlay wendawo) kufanele atholakale njengokwenza okukhiphayo (esimweni sami kubonakala sengathi "I-Airplay: Ihhovisi") .
Kukhona ezinye izinyathelo uma ufuna futhi ukufaka ukufaka kwe-Bluetooth:
Engeza lokhu kwi-main.conf eyinhloko:
Layisha i-main.conf ebuyekeziwe:
Yenza i-Pi Raspberry itholakale nge-Bluetooth:
I-BabelPod kufanele iboniswe njengama-raspberrypi uma uskena amadivaysi e-Bluetooth efonini yakho noma kukhompyutha (leli gama lingashintshwa ngokuvula i-bluetoothctl nokusebenza "kwe-BabelPod" uhlelo). Uma uzama ukuxhuma i-Raspberry Pi idinga ukumiswa ukuze ithembele idivayisi yakho. Ungakwenza lokhu kusuka esibonakalayo sedeskithophu, noma kusukela esibulalayo.
Manje kufanele ukwazi ukuxhumeka ngempumelelo bese ukhetha njengokukhipha komsindo kudivayisi yakho.
Ku-UI yeBebPP web iwebhu kufanele manje ukwazi ukukhetha idivaysi yakho ye-Bluetooth njengengalo bese uyikhipha ku-HomePod yakho nge-AirPlay.